भ्रमण वर्ष चिनाउन यतीकाे स्वरूपमा ठट्टा किन ? | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home समाचार राष्ट्रिय समाचार भ्रमण वर्ष चिनाउन यतीकाे स्वरूपमा ठट्टा किन ?
भ्रमण वर्ष चिनाउन यतीकाे स्वरूपमा ठट्टा किन ?
२०७६, १८ माघ शनिबार ०९:२४
पाल भ्रमण वर्षका लागि बनाइएको यतीको मस्कट चर्को विवादमा परेको छ । धेरैले यतीको मस्कट सुमो खेलाडी, पहलमान, लाफिङ बुद्ध या हनुमान हुनसक्ने बताएका छन् ।
भ्रमण वर्षमा सार्वजनिक गरिएको यतीको शरीर भने चिल्लो छालाजस्तो देखिन्छ । स्वरूप पनि पहलमानजस्तो छ । कपाललाई जुरो बनाइएको छ । ‘यतीलाई विश्वभर चिनाउन सरकार संवेदनशील भएको देखिँदैन’, लेखक पाँडे भन्छन्, ‘यतीको स्वरूपमा ठट्टा भएको छ ।’ यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छ ।
Previous articleपदयात्री अलपत्र अपडेट: गोठाला लिएर आवाज आएको ठाउँतर्फ जाँदै उद्धार टोली
Next articleपाचौं आईबीकप शुरु